Hluttaw News | NLD | Page 2
Posted By: mygate wayon: ဇနျနဝါရီ 30, 2018 In: Hluttaw NewsNo Comments
၁။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website ကို ပိုမိုပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website အသစ်အား ပိုမိုပြည့်...	Read more
Posted By: mygate wayon: ဇနျနဝါရီ 20, 2018 In: Hluttaw NewsNo Comments
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲအချိန်...	Read more
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူသံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Vanessa Chan Yuen Ying အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဇနျနဝါရီ 11, 2018 In: Hluttaw NewsNo Comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူသံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Vanessa Chan Yuen Ying အား ယနေ့ ၁၃၃၀ နာရီတွင် နြေ...	Read more
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၁ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် သည် Anhui Provincial State-owned Assets supervision and Administrat...	Read more
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင် (ခ)ဦးထွန်းထွန်းဟိန် မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဇနျနဝါရီ 10, 2018 In: Hluttaw NewsNo Comments
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင်(ခ)ဦးထွန်းထွန်းဟိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအား ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော...	Read more
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အသီးသီး၏ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၉ ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အသီးသီး၏ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွ...	Read more
ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: ဒီဇငျဘာ 08, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကို (၇-၁၂-၂၀၁၇) နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် အောက်ပါအစီအစဉ်များဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည် – ၁။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နေရာယူခြင်း၊ ၂။ ဒု...	Read more
ဂျပန်နိုင်ငံ Trust Fund for Restoration and Maintenance of the Peace Bell မှ လှူဒါန်းသည့် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ခေါင်းလောင်းပုံစံ ငယ်တစ်လုံးကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ လွှဲပြောင်းလှူဒါန်းသည့်အခမ်းအနား ကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: ဒီဇငျဘာ 07, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် ဂျပန်နိုင်ငံ Trust Fund for Restoration and Maintenance of the Peace Bell မှ လှူဒါန်းသည့် ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး ခေါင်းလောင်း ပုံစံငယ်တစ်လုံးကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့...	Read more
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း လန်ဒန်အခြေစိုက် International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr.Phillip Tahmindjis နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆု
Posted By: mygate wayon: ဒီဇငျဘာ 06, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် လန်ဒန်အခြေစိုက် International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr.Phillip Tahmindjis နှင့် အဖွဲ့အား (၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက...	Read more
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Shinzo Abe နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Posted By: mygate wayon: ဒီဇငျဘာ 02, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tadamori Oshima ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသောပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဒီဇင်ဘာ...	Read more